Ọnụ ọgụgụ ndị Lego na-asọpụrụ Steve Jobs | Esi m mac
Otu ngwugwu nke onu ogugu abuo Lego Omenala akwụgo ụtụ nye ngalaba-onye hiwere Apple, Steve Jobs. Ma usoro onu ogugu ohuru a biara site na ekele 'FamousBrick' ụlọ ọrụ ahaziri iche na Lego, ebe ọ sọpụrụ Steve Jobs. Anyị na-egosipụta nsụgharị nke abụọ nwa-nwoke dị ka na njedebe nke ya ọnwụ, na-egosi na nkà na ụzụ akụkọ.
Steve Jobs abughi uwa mbu ama, ebe obu Ukwuu O meela ka otutu mmadu juo na obere ihe osise plastik ya. Companylọ ọrụ ahụ na-enyekwa nsụgharị Lego nke onye nrụpụta Apple ugbu a '' Jony Ive '', na ngalaba-nchoputa 'Steve Wozniak', yana ndị ama ama ama ama nke Microsoft 'Bill Gates', na onye okike nke Facebook 'Mark Zuckerberg', Ọbụna 'Edward Snowden' nke NSA.
Ukwuu dabere na AlemaniaNa mgbakwunye na ihe osise plastik, a raara ha nye ime ha n'ụdị ụgbọ mmiri n'ụwa niile n'efu. Ntọala a gụnyere ụtụ maka Steve Jobs, nwere isi jupụtara na ntutu ntutu dị ebube, na onye ọzọ nwere akara ụgha ojii ya na jeans, yana ntọala gosipụtara ụbọchị ọmụmụ ya na ọnwụ ya, yana kaadị ozi. Ahịa bụ $ 29,80 na USma € 12,90 na Europe, gbakwunyere ego ndị ọzọ dịnụ.
Anyị nwere mmasị na omenaala ndị Lego sitere na FamousBrick. Anyị kwenyere na ndị a na mwekota nke ezigbo ndi mmaduGị, ndị mogulu, dị mma karịa ndị dike.
Fuente [ama ama]
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Ndị Lego na-asọpụrụ Steve Jobs
Na websaịtị nke ndị German famousbrick.de ọnụ ahịa dị ọnụ ala karịa na enwere ọtụtụ ihe.